Firefox 91 inosvika neHTTPS-Kutanga, zvigadziriso zveTCP, yekudhinda maitiro, kurodha pasi faira uye nezvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Firefox 91 inosvika neHTTPS-Kutanga, kugadzirisa kweTCP, yekudhinda maitiro, kurodha pasi faira uye nezvimwe
Iyo itsva vhezheni yeFirefox 91 yaburitswa iyo inorondedzerwa se bazi rekutsigirwa kwenguva refu (ESR) ine zvinyorwa zvakatumirwa mukati megore rose. Uye zvakare, pamwe neshanduro iyi nyowani, iyo nyowani nyowani yebazi rapfuura ESR 78.13.0 yakaburitswawo
Mune iyi vhezheni itsva yebrowser iyo inoratidzwa pamwe nekuvandudza uye kugadzirisa bug, firefox 91 yakagadzirisa 19 kusagadzikana, ayo gumi nematanhatu anoiswa senge ane njodzi, ayo gumi acho anokonzerwa nematambudziko ekurangarira senge buffer inopfachukira uye kuwana kune dzakatoburitswa ndangariro nzvimbo.
1 Main nhau muFirefox 91
Main nhau muFirefox 91
Mune ino vhezheni itsva yeFirefox 91, mutemo HTTPS-Kutanga inogoneswa nekutadza, yakafanana neiyo "HTTPS chete" sarudzo yakambowanikwa mukugadzirisa. Paunenge uchiedza kuvhura peji isina encryption kuburikidza neHTTP mune yakavanzika maitiro, bhurawuza rinotanga kuedza kuwana saiti kuburikidza neHTTPS uye kana kuyedza kukakundikana, ichangoerekana yawana saiti isina kunyorera.
Imwe shanduko yakakosha ndeye TCP nzira kugona kugona (Yese Kuki Kudzivirirwa), Inoitwa muakavhurika kubhurawuza maitiro uye kana kuomarara ichivharira spam (yakasimba) maitiro anosarudzwa. Mune vhezheni itsva, nzira yekubvisa makuki yakashandurwa kusaburitsa kudonhedza dhata chakavanzika, uye vashandisi vava kuziviswa nezvesaiti dzinochengetera ruzivo munharaunda.
Zvakare muFirefox 91 iyo chinja mune kufunga kwekuchengetedza mafaira akavhurika mushure mekuisa, sekunge kurodha mumashandisirwo ekunze ivo vava kuchengetwa mune yakajairwa "Dhawunorodha" dhairekitori, panzvimbo yedhairekitori rechinguva.
Tambien iyo yekudhinda maitiro eiyo yakapfupiswa vhezheni yeiyo peji inodzoserwa, iyo yakafanana neinoonekwa mumodi yekuverenga, mune chete mavara akanangana eiyo peji anoratidzwa, uye zvese zvine chekuita nemabatiro, mabhenji, mamenyu, mabara ekufambisa uye zvimwe zvisina-zvemukati zvine chekuita nezve peji zvakavanzwa. Iyo modhi inogoneswa nekumisikidza iyo Reader View isati yadhinda. LTsigiro yeiyi modhi yakamiswa mukuburitswa kweFirefox 81, mushure mekushandura kuchiratidzo chekutarisa chitsva usati wadhinda.
Panguva yeiyo «Chinja kune tab» maitiro, ayo anotendera iwe kuchinjira kune iyo tabo kubva pane rondedzero yemazano ari mukero bar, ikozvino inovhara mapeji mune yakavanzika yekuvhura hwindo.
Pakupedzisira mushanduro ye Firefox yeWindows yakawedzera rutsigiro kune imwechete yekusaina-tekinoroji (SSO), iyo inobvumidza iwe kuti ubatanidze kune saiti uchishandisa zvinyorwa kubva ku Windows 10 nharaunda.
sudo snap install firefox-91.0.snap
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Firefox 91 inosvika neHTTPS-Kutanga, kugadzirisa kweTCP, yekudhinda maitiro, kurodha pasi faira uye nezvimwe
Haina kuvandudzwa paLinux Mint.
Pindura kuna M
Shutter yadzoka mune yepamutemo Ubuntu repository, asi kwete Canonical parizvino
yekutanga OS 6 Odin ikozvino inowanikwa nemitambo yekubata-yakawanda, yakagadziriswa ziviso system uye nezvimwe zvakawanda